Tattoos Fern iyo macnahooda | Tattoo
Tattoo-ka Fern, fudud oo xarrago leh
Ma aha Cherry | | Tattoos ee Ubaxyada iyo Dhirta
Tattoos-ka 'Ferns' waa baddal weyn haddii aad raadineyso geedo ka duwan sidii aad u sawiri lahayd. taasna, iyadu, waxay leedahay macno qurux badan. Hadaad rabto inaad ka fogaato ya classics tattoos kacay, ubaxyo badan ama ubax, ferns waa fikrad aad u fiican. Intaa waxaa dheer, waxaan ku dari karnaa noocan ah tattoos ka tirsan qaybtaas Tattoos yar oo aan hore uga soo hadalnay in ka badan hal munaasabad.
Waana in dadka intooda badan ee go'aansada inay sawiraan fern, doortaan tattoo a madow, fudud oo aad ufudud u raran. Marka la soo koobo, tattoo xarrago leh oo fudud. Kufiican ragga iyo dumarka labadaba. Laakiin waa maxay macnaha tattoo fern? Sidii aan horeyba u sheegnay, waxay leeyihiin macno qurxoon oo kugu dhiiri galin doona inaad mid ku qabato maqaarkaaga. Marka xigta waxaan ka hadli doonaa macnaha dhirtaan xiisaha leh waxaanan ku siin doonaa xoogaa fikrado ah oo kugu dhiirrigelinaya nashqaddaada soo socota.
1 Ferns, oo ah nooc dhir aad u xiiso badan
2 Micnaha tattoos
2.1 Qabiil iyo halyeeyo
2.2 Ferns waqtiyadii Fiktooriya
3 Fikradaha tattoo tattoo
3.1 Tattoo taranka dhabarka
3.2 Fern qabiil
3.3 Fern sida labaad
3.4 Fern fudud oo curcurka ah
3.5 Fern macquul ah
3.6 Weheliyaan dhir kale
4 Fern leh cillaan
5 Sawirada Fern Tattoos
Ferns, oo ah nooc dhir aad u xiiso badan
Ferns waxaa lagu kala saaraa inay yihiin nooc dhir aad u gaar ah, oo aan lahayn abuur ama ubax, oo ku tarma isboorti. Noocyada isboortiga waxaa lagu hayaa nooc ka mid ah jawaanno, oo loo yaqaan 'sori', qeybta hore ee caleemaha dhirta. Markuu waqtigu yimaado, bislaanshaha ka dib, rakibida ayaa furan oo kudka ayaa la siidaayaa.
Badanaa waxay ku koraan aag aad u qoyan oo waxaa jira noocyo badan. Kuwa ugu caansan waxay leeyihiin aalado muuqaal leh, inkasta oo ay jiraan qaar leh garbaha yaryar iyo xitaa kuwa aan lahayn garbaha, laakiin leh afkoda qaabeeya sida gacanka violin. Waa dhir cagaaran, oo ku dhex kora hoosta, oo leh midabbo u dhexeeya cagaar madow illaa sumurud daran.
Fern wuxuu leeyahay macno weyn oo sixir ah iyadoo kuxiran dhaqanka caanka ah. Sida dhirta kale sida dhirta, fern-ka waxaa loo aaneeyaa sifooyin lagu soo jiito nasiib iyo maal qofkasta oo leh. Intaas waxaa sii dheer, fernka guriga ku jira waa fikrad aad u wanaagsan maadaama dhaqamo badan ay sheegtaan inay siinayso awood difaac labadaba guriga laftiisa iyo dadka ku noolba.
Qabiil iyo halyeeyo
Waxa kale oo la faalleeyay taas Waa geed ay adeegsadaan qabiilooyinka qaar si ay ula dagaallamaan jinka sharka leh. Iyo xitaa, wixii aan kari karay inaan ka akhriyo, fernku waa geed soo jiita roobka, in kasta oo dhinacan aan ahayn layaab, maaddaama ay tahay oo keliya inaad ku aragto gobollada iyo cimilada cimiladan laga helayo.
Ferns sidoo kale waxay la xiriiraan tiro badan oo halyeeyo Slavic ah, oo ka mid ah kuwa ugu caansan, midkaas sheegashada ay kaliya ubaxaan habeenka ugu gaaban sanadka. Halyeeygu wuxuu leeyahay haddii aad hesho ubax fern (wax aad u adag, xaqiiqda aan macquul aheyn!) Waxaad nasiib u yeelan doontaa noloshaada oo dhan.
Hadana halyeey kale, markan finnishka, wuxuu leeyahay hadaad hesho ubax fern waxaad awoodi doontaa inaad noqoto mid aan muuqan oo aad u safarto meel khasnad ayaa ku sugeysa oo ay ku hareereysan yihiin wisps...
Ferns waqtiyadii Fiktooriya
Ugu dambeyntii, Waa wax xiiso leh in la ogaado in, xilliyadii Fiktooriya, uu jiray moodo la xidhiidha ferns kaas oo nooc kasta oo waxyaalo ah lagu sharraxay (laga bilaabo dhoobada, ilaa dharka, buugaagta iyo xitaa farshaxanno) leh noocyada dhirta, ha ahaado mid dhab ah, mid qalalan ama mid la sawiray. Moodhadhkani wuxuu u horseeday daraasad qoto dheer iyo sawirro cajiib ah oo ku saabsan shaqooyinka la xiriira noocan dhirta.
Quruxda ferns, iyo noocyadooda kala duwan, waxay na siin karaan fikrado badan si naqshadeenu u noqoto mid gaar ah oo asal ah. Waa kuwan fikrado aan rajeyneyno inaad waxtar u leedahay:
Tattoo taranka dhabarka
Dhabarku waa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee aad ka heli karto mid ka mid ah dhirta cajiibka ah ee lagu sawiray. Joomatari ee garbaha ayaa u muuqda mid aad u wanaagsan ka dib gadaashaIntaa waxaa dheer, waxaad ku ciyaari kartaa cagaarka madow ee caleemaha iyo casaanka jirridda. Waadna dooran kartaa qaab macquul ah, sida kan sawirka kujira, ama waxaad dooran kartaa taabashada midab-biyoodka, madow iyo caddaan ...
Dabcan waa mid ka mid ah waxyaabaha aad u xiisaha badan ee aad ka heli doonto. Fernku kaligiis buu noqon karaa ama wehelin karaa, in kasta oo ay muhiim tahay, in geedka u istaago oo la garto, waxaad jeceshahay DJ-ga sawirka ku jira: caleemaha u kala saar mid mid, adigoo ilaalinaya qaabkooda qurxoon iyo saddexagalka
Fern sida labaad
Mararka qaarkood ferns ma ahan kuwa halyeeyada u ah sawirka, laakiin waxaa loo isticmaali karaa sidii farshaxan marti ah. Qoto-dheer, mahadsanid qaabkooda, waxay ku siin karaan ciyaaro badan haddii ay midab yihiin ama madow iyo caddaan yihiin, iyagu waa dhammaystir buuxa oo kor loogu qaadayo geedka aad u dooratay sida jilaaga.
Fern fudud oo curcurka ah
Miyaynu hore u sheegnay in qaabka ferns uu ku habboon yahay tattoo? Fudeydkeedu sidoo kale wuxuu ku habboon yahay tattoos sida kan sawirka ku jira. Labaduba waxay siinayaan dareen aad u qabow nolosha iyo dhaqdhaqaaqa. Xullo fern caadi ah ama u tag mid leh caleemo wareegsan iyo geedka canabka ah xoogaa isbeddel ah.
Fern macquul ah
Shaki la'aan, boqorka tattoo fern waa midka ku saleysan naqshada dhabta ah ee dhirtaan. Si kastaba ha noqotee, xitaa haddii ay macquul tahay, ha u diidin inaad siiso taabasho ka duwan si aad uga dhigto mid farshaxan leh, tusaale ahaan, taabashada midab-biyoodka ama cilladda, sida kan sawirka ku yaal. Xitaa waxaad ka qaadan kartaa dhiirigalin sawiradii hore ee Fiktooriya ee aan horay uga soo hadalnay taabashada qadiimiga ah.
Weheliyaan dhir kale
Naqshad yar oo ka duwan ta fernka oo ah dugsi sare oo aan horay uga soo hadalnay waa in lagu daro dhir kale. Sidaa darteed, dhowr naqshadood oo yaryar ayaa la isku daraa, oo isla caan ah, oo isku meel ah (xaaladdan oo kale, gacanta, in kasta oo ay sidoo kale noqon karto lugta, qoorta ...), sida qaybo xujo ah, si aad u gudbiso bilicsanaanta bilicsanaanta bilicsanaanta. asalka.
Fern leh cillaan
Waxaanan ilaawi karin geedo cillaan ah. Waxaad ku heli kartaa tattoo labadaba adoo raacaya qaabkan adiga oo kugu dhiirrigelinaya. Sidaad u aragto, naqshadaha cakiran ee jilicsan ee xinnaha waxay u egyihiin ferns, oo u oggolow qaar naqshadaha aad iyo aad u qabow, wax aad u dhib badan oo leh qaab qurux badan.
Waxaan rajeyneynaa inaad xiiseyneysay macnaha astaamaha fernka waxaanan ku siinay xoogaa fikrado ah oo ku saabsan sawirkaaga xiga. Noo sheeg, ma haysaa wax tattoos ah qaabkan? Ma jiraan wax aad si gaar ah u jeclaatay? Miyaad u maleyneysaa inaan wax fikrado ah haysanno? Xusuusnow inaad noo sheegi karto waxaad rabto, tan awgeed, waa inaad nooga tagtaa faallo!
Sawirada Fern Tattoos
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos ee Ubaxyada iyo Dhirta » Tattoo-ka Fern, fudud oo xarrago leh